- विश्वकपमा सभ्य जापानीज दर्शक, नेपालीले कहिले सिक्ने?
विश्वकपमा सभ्य जापानीज दर्शक, नेपालीले कहिले सिक्ने?
काठमाडौं: विश्वकप फुटबलको समूह ‘एच’ अन्तर्गत भएको खेलमा जापानले कोलम्बियालाई पराजित गरे पछि खेल भएको रंगशाला सफा गरेर एक सभ्य दर्शकको छाप छोडेका छन् । जापानीज समर्थकहरुले आफू बसेको सिट वरपर सरसफाई गरेर आफ्नो सभ्यता विश्वसामु देखाएका हुन् ।
उनीहरुले फोहोर हाल्नका लागि आफै ठूला प्लास्टिक ब्याग बोकेका थिए र खेल सकिएपछि सबै फोहोर उठाएर सुरुको जस्तै सफा बनाएका थिए। जापान बेस्ट फुटबल जर्नालिस्ट स्कट म्याकेनटायरले यो फुटबल कल्चर मात्र नभएर जापानिज कल्चर भएको बताएका छन्। जापानीज टिमसँगै रसियामा रहेका उनी ब्लु सामुराई फ्यानको कामबाट कुनै आश्चर्य चकित भएनन्।
जापानले रंगशाला सफा गरेको यो पहिलो पटक भने हैन । ब्राजिलमा भएको २०१४ विश्वकपमा ग्रिस सँग भएको बराबरी खेल तथा आइभरी कोस्ट र कोलम्बिया सँग पराजय भोगेर निराश भएका जापानीज दर्शकले आफ्नो स्थान सफा गरेर सभ्यताको पहिचान देखाएका थिए ।
जापानी दर्शकहरु उक्त व्यवहारबाट हामी नेपालीले समेत पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपालमा हुने कुनै पनि आयोजित कार्यक्रम पछि उक्त स्थान फोहोर भएर दुख पाउने गरेको आयोजकहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपालमा मात्र नभई विदेशमा समेत नेपाली समुदायले आयोजित गरेको कार्यक्रम स्थल फोहोर हुने गरेको पाइएको छ । हालै मात्र अस्ट्रेलियामा भएको नेपाली समुदायको एक कार्यक्रम पछि कार्यक्रम स्थल फोहोर भएको हुँदा त्यहाँको मेयरले कार्यक्रम संचालनमै रोक लगाएका थिए ।
जापानीज नागरिकले देखाएको सभ्यता बाट हामी नेपालीले समेत ज्ञान लिँदै आफ्नो वातावरण सफा गर्न सिक्नुपर्छ । राजनीतिक, खेलकुद, संस्कृतिक, सांगीतिक जस्ता कार्यक्रम नेपालमा निरन्तर भइ रहन्छन् । उक्त कार्यक्रम् स्थललाई आफैले सफा गरी आफ्नो वातावरण सफा राख्न हामीआफै अघि सर्नु जरुरी छ ।